Arrin laga xishoodo oo laga soo sheegay Isbitaalka Digfeer ee Muqdisho + Video | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Arrin laga xishoodo oo laga soo sheegay Isbitaalka Digfeer ee Muqdisho +...
Arrin laga xishoodo oo laga soo sheegay Isbitaalka Digfeer ee Muqdisho + Video
(Muqdisho) 07 Agoosto 2019 – Waxaa laga sheegtay hab-dhaqanka Soomaali badan, iyadoo ay marar badan soo noqnoqatay arrintani, gaar ahaan dhanka si wanaagsan u adeegsiga waxyaabaha bulshada ka dhexeeya (public facility) iyo dhowristooda oo aad noogu gaaban.
Qof bukaan ah oo tegey isbitaalka Digfeer oo mar aan dheerayn si casri ah loo dhisay ayaa wuxuu Hadalsame Media uga warramay in durba la jejebiyay qasabadihii musqulaha isbitaalka, isla markaana biyo lagu daadiyo sagxadda musqulaha xaajada oo aan sidaa loogu tala gelin, iyagoo leh tubbo yar oo loogu tala galay inuu qofku ku istajoodo, balse ay dad badani sagxaddii ku wayso qaataan.
”Waxaan la yaaban ahay waxa ay ku jejebiyeen tubbooyinka musqulaha” ayuu is waydiiyay qofka noo warramay oo ah mid qurbaha ka noqday.
Qof kale oo ku safray dayuuradda Turkish Airlines ayaa sidaa si la mid ah kasoo weriyay musqulaha dayuuraddaasi oo la sheegay in lagu dhex waysa qaatay ama xitaa sagxadda la dhigay waxyaabo aan loogu tala gelin, ama xitaa sigaar lagu dhex cabey.
Waxaa intaa dheer in aanu qofku maqlaynin ama qaadanaynin khaladkiisa xitaa haddii lagu qabto, balse uu is waalayo, taasoo ah dhaqan badownimo ah oo aad u fongoran.
Previous articleWhy rising Somali numbers scare us
Next articleSucuudiga & Imaaraadka oo qarka u saaran inay ku kala GO’AAN dagaalka Yaman (Maxay isku qabteen?)